Wararka Maanta – Page 32 – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Turkiga oo xoojiyay duqaymaha uu ka wado Suuriya
STN News January 20, 2018 Leave a comment
Dowladda Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in ay si weyn u xoojisay duqaymaha cirka ee ay ku hayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ku sugan wuqooyiga Suuriya….
Madaxweyne Farmaajo oo ku sii jeeda degmada Caabud-Waaq ee gobolka Gal-guduud
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa saakay ku wajahan magaalada Caabud-Waaq ee Gobolka Galgaduud. Madaxweynaha waxaa socdaalkiisa Cabud-Waaq…
Danjire Cali Saciid Fiqi oo ka hadlay qorshaha dowladda ee Soomaalida ku dhibaateysan Liibiya
Maalmihii ugu danbeeyayba magaalada Tunis ee dalka Tunisia ku sugan Safiirka Soomaliya ee u fadhiya Midowga Europe Dr. Ali Said Faqi oo ay weheliso ergeyga…
Madaxweyne Sisi oo markale u tartamaya madaxtinimada Masar
Madaxweynaha Masar Abdel-Fattah al-Sisi ayaa xaqiijiyay in uu doonaayo inuu u tartamo doorashada xigta ee dalkaaai. Doorashadaasi ayaa noqon doonta tii saddexaad ee ka dhacda…
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka oo u ambabaxay bariga dhexe
Madaxweyne ku xigeenka dalka Mareykanka Mike pence ayaa u ambabaxay bariga dhexe iyadoo aan la meel marinim miisaaniyadda dalka Mareykanka. Booqashada afarta maalin ee Mr…
Dowladda Ruushka ayaa beenisay warar ay baahisay warbaahinta dowladda Turkiga oo sheegayay in Ruushka uu kala baxay ciidamaddiisa deegaanka Afrin oo ku yaalla waqooyiga waddanka…
Dowladda Mareykanka ayaa wajaheysa inay shaqeyn waayaan dhammaan laamaheeda federaalka kaddib markii ay senetarada waddankaasi ku guuldareysteen inay isku afgartaan miisaaniyada cusub. Ma caddeyn halka…
Gudiga Amniga Jubbaland oo ka shiray xaaladaha dhanka ammaanka
STN News January 18, 2018 Leave a comment
Kulanka ay maanta yeesheen gudiga amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweyne kuxigeenka 1-aad ee Jubbaland Mudane Max’uud Sayid Aadan, waxaana ka qeybgalay,…
Calanka Galmudug oo markii ugu horeysay maanta laga taagay degmada Dhuusa-Mareeb.
Kaddib khilaaf muddo dheer soo jiray calanka dowlad gobolleedka Galmudug ayaa maanta si rasmi ah looga taagay xarunta cusub ee madaxtooyada Galmudug ee Dhuusa-Mareeb. Munaasabada…
Dhaktar u ololeynaysa in Gudniinka farcooniga sharci laga dhigo
Dhakhtar u dhalatay dalka Kenya ayaa maxkamada sare ee dalkaasi geeysay kiis ay ku dalbanayso in gudniinka fircoonga laga dhigo sharci. Dr Tatu Kamau ayaa…
Rohingya ma badbaadi doonaan haddii Myanmar lagu celiyo?
Dowladaha Bangladesh iyo Myanmar ayaa wada saxiixday heshiis ku saabsan qowmiyadda Rohingya oo maamulka Burma uusan dooneyn in uu aqoonsado ama dalkaasi ku noolaadaan. In…
Wafdi ka socda beesha caalamka oo gaaray magaalada Dhuusa-Mareeb.
Wafdi uu hoggaaminayay Ergeyga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo ay uga qeyb galayaan Munaasabadda dhameystirka…
Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo faah faahin ka bixiyay shir culima’udiin Soomaaliyeed uga socda Kismaayo.
Magaalada Kismaayo waxaa ku shirsan culima’udiin Soomaaliyeed oo maalmihii ugu danbeeyayba halkaa shir ku lahaa, waxaana jiray fasiraado kala duwan oo bulshada Soomaaliyeed shirkaa ka…
Markab shidaal oo ku gubanaya badweynta.
Markab laga leeyahay dalka Iran ayaa ku quusay badda dalka Shiinaha, waxaana hadda lasoo sheegayaa in uu bilaabay gubasho. Markabkan ayaa lagu magacaabaa Sanchi, waxaana…
Xubno ka tirsan jabhaddii hubka dhigtay ee FARC ayaa dalka Colombia ka dhisaya hotel weyn oo ay ka hirgalinayaan qaab nololeedkii jabhadnimada ee ay iyaga…
Boqolaal dumar ah oo ‘qaaday uur’ been abuur ah.
Booliiska dalka Guinea ayaa xabsiga u taxaabay haweenay la sheegay in ay dawo dhireed siisey boqolaal haween ah, iyada oo u balan qaaday in ay…
Ardayda Shiinaha oo lagu imtixaamay magacyada macalimiintooda.
STN News January 17, 2018 Leave a comment
Kuleej ku yaala dalka Shiinaha ayaa su’aalaha imtixaamka guud kusoo daray su’aal la xiriirta magacyada macalimiinta iskuulka, iyada oo ardayda loo daabacay sawirada macalimiinta, lagana…
Diyaarad UN-ka leeyahay oo hal arrin u diiday in Madaxweynaha Puntland ka soo qaado Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta ka baaqday safar uu ku tagi lahaa magaalada Dhuusamareeb, kaddib markii diyaarad ay leedahay UN-ka oo ka…
Puntland oo ku eedeysay Somaliland in ay taageerto Ururka Al-shabaab
Iyadoo dhawaan ciidamo ka tirsan Somaliland la wareegeen deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa waxaa sii kordhaya hanjabaado iyo Warar xambaarsan dhiill colaadeed oo ay…
Axmed Madoobe oo ka baaqday safar uu ku tagi lahaa magaalada Dhuusa-Mareeb
Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka qeybgali doonin munaasabada dhameystirka heshiiska Galmudug iyo Ahlu Sunna ee lagu qabanayo magaalada Dhuusa-Mareeb ee…
Maamulka Koonfur Galbeed oo qabtay xubno ka tirsan Al-shabaab
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in Ciidamo ka tirsan Koofur Galbeed iyo ciidanka xoogga dalka ay nolosha ku qabteen dagaalamayaal ka tirsan…
Madaxweyne Biixi iyo Ra’isal wasaaraha Itoobiya oo ka hadlay kulankooddii dhexmaray
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo weftigii ayaa kulan la yeeshay Ra’isal wasaaraha Itoobiya Mr. Hailemariam Desalegn, waxaanay ka wada hadleen arrimo kala duwan…
Heshiiskii Galmudug iyo Ahlu Sunna oo maanta la dhameystirayo.
Sida uu qorshaha yahay magaalada Dhuusa-mareeb waxaa maanta lagu wadaa in uu ka dhaco Shirweyne lagu dhameystirayo heshiiskii magaalada Muqdisho ay ku kala saxiixdeen Maamulada…
Mareykanka iyo Canada oo ku baaqay in la dhaqangaliyo cunaqabataynta k/Wuqooyi.
Labaatan dal oo ay horkacayaan Canada iyo Mareykanka ayaa ku baaqay in si adag loo dhaqangaliyo cunaqabataynta ka dhanka ah Kuuriyada Wuqooyi. Wasiirka arrimaha dibadda…
Uganda oo kaydka dhiig uu gabaabsi yahay.
Waaxda caafimaadka dalka Uganda ayaa ka digtay in uu si aad ah u hooseeyo dhiiga yaala goobaha lagu keydiyo dhiigga bukaanada lagu shubo. Xarunta lagu…
Maraykanka oo hakinaya gargaarkii uu siin jiray Falastiiniyiinta.
Maamulka Trump ayaa hakiyey in ka badan kala badh lacagtii uu siin jiray wakaaladda Qaramada Midoobay ee taageerta Falastiiniyiinta. Maraykanku wuxu sheegay in uu sannadkan…